Boqollaal qoys oo beeralay ah oo deggan 54 tuulo oo ka tirsan Ceelbarde oo la siiyay abuur ay tacbadaan - Radio Ergo
Boqollaal qoys oo beeralay ah oo deggan 54 tuulo oo ka tirsan Ceelbarde oo la siiyay abuur ay tacbadaan
(ERGO) – Shan boqol iyo konton qoys oo ah beeralay deggan 54 tuulo oo ka tirsan degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool ayaa bartamahii Maarso helay abuur iskugu jira 2kg oo digir, 5kg oo masago, 5kg galey iyo qudaar.
Beeraleydan oo dalagyadoodii u dambeeyay uu ayax ka cunaday bilihii Nofeembar iyo Diseembar ee sanadkii hore ayaa abuurkan loo siiyay si ay uga faa’iidaystaan roobka guga.
Cali Muxumad Adan oo ku nool deegaanka Abeesaale oo Ceelbarde u jira 30 km waxa uu qoyskiisa ku jiraa 60 qoys oo helay abuurka la gaarsiiyay deegaanka. Wuxuu sheegay in la siiyay min shan kiilo oo maseggo, galley iyo iyo khudaar ah iyo labo kiilo oo digir ah si la mid ah qoysaska kale. Wuxuu billaabay ka shaqeynta beerta oo uu ka rajo qabo in dalagyo fiican ay uga soo go’aan gugan.
“Abuurka la i siiyay waan saaray beerta. Waan caraggeddiyay, waana geed qaaday. Hadda xareedda un baa soo bixitaan laga rabaa.”
Cali oo ah xoola-dhaqato beeraley ayaa markii uu ayaxa ku khasaaray billaabay iibinta 60 neef oo ari kuwaas oo uu dhaqanayay, maaddaama ay meesha ka baxeen dalagyadii beerta u saarnaa oo xilliga jilaalka qoyskiisa uu uga bixin lahaa.
Raadiyaha Ergo ayuu u sheegay in wixii ka dambeeyay bishii Janaayo wixii uu suuqyada u safarsado bil kasta saddax neef oo Ari si qoyskiisa oo ka kooban 9 qof uu ugu helo raashin ay karsadaan.
“Waxaan ku noolaa inaan qaraabo uun deyn ka qaato iyo markii aan bishii deyntii waayo aan arigii neef ka iibsado, Suuqa Ceelbarde iyo Hiirana baan geyn jiray. Tuulada nafteeda waa laga dhax-gadanaa oo raqiis baa lagaa siinaa. Haaf sonkor camal ayaa lagaa siinaa. Wixii ehel ah oo wax kugu dhaamo deynta waa laga qaadanaayay oo waa la deynsanaayay.”
Cali ayaa Raadiyo Ergo ayuu u sheegay in lacag dhan $600 ay kaga baxday iibka abuurka iyo falista beerta. $400 oo kamid lacagtaas oo uu ka soo deyntay nin ay qaraabo yihiin ayaa weli lagu leeyahay.
Ayax koox koox u socday oo Bakool kaga soo tallaabay dhanka gobolka Hiiraan ayaa bishii 11-aad ee sanadii hore ku degay beertiisa oo 20 hiktar ahayd. Wuxuu sidoo kale ayaxu xaalufiyay 213 beer oo ku yaallay lix tuulo oo ka tirsan degmada Ceelbarde.
Cabdiwali Bare Cusmaan oo ah isu-duwaha wasaaradda beeraha maamulka koonfur-galbeed ee magaalada Ceelbarde oo la hadlay RaadiyoErgo ayaa sheegay in wasaaradda yo Hay’adda Caalamiga ee ICF oo is garabsanayo ay abuurka ay bishii Maarso gaarsiiyeen beeraleyda.
Qoysaskan ayuu sheegay in loo xushay maaddaama sanadkii tagay ay labo mar ku qasaareen ayax ku dagay beeraha gobolka Bakool. Cabdiwali ayaa intaas ku daray in dadka ay abuurka siiyeen ay ahaayeen kuwii ugu nugulaa oo jiilaalka ku xoola waayay.
“Shan boqol inta masagada iyo sadexda shey aan kuu sheegay ayaan u qeybinnay. Inta kontonka ah ayaa loogu daray nimanka oo ahaa sisinta. Kontonkaas ayaa ahaa beero ceelal gacanta lagu waraabiyo. Dadku hadba sidii uu u kala tabar daran yahay ayaan u kala qiimeynay.”
Marka laga soo tago Abeesaale waxaa tuulooyinka abuurka la siiyay ka mid ah Qurac-joome oo 120 km degmada Ceelbarde.
Colaad Cabdi Isaaq oo 64 jir ah waxa uu kamid yahay 80 qoys beeraleey xoolo-dhaqato ah oo 24-kii bishii hore helay abuur bilaash ah. Raadiyo Ergo ayuu Colaad ugu warbixiyay abuurka la siiyay iyo wuxuu kala ahaa.
“Abuurka horto yar yarey shan kiilo yaa la bixiyay, galeyna labo kiilo, digirna labo kilo. Sidaas baa loo bixiyay dadka u nugul ayaa la siinaayay oo dadka oo dhan lama wada siineyn, anigana sidaas ayaa la ii siiyay.”
Colaad ayaa sheegay in ayaxii beeraha ka cunay ka sokow ay shantii bil ee ugu dambeysay ay ka dhinteen 12 neef oo ari markii uu u waayay biyyo iyo baad, ayna adkaatay nolosha qoyskiisa oo 12 qof ka kooban. Wuxuu xusay ay dabka shitaan hal ama labo waqti maalinkii. Lacag iyo raashin uu ka helayay dad qaraabo yihiin kuwaas oo uu la hadlo marka uu xaalku ku xumaado.
“Xoolo wixii haysto wax ka qaado iyo qaraabo wax u doono ayaan ku nooleen. Deynta waxaa waaye nin dukaan haysto oo meesha degdan ama aad dhahdo ilmahaa iga fadhiya, marka adigu rafaad kaas baa lagu joogay.”
Beeralay xoolo-dhaqatadan abuurka la siiyay ayaa rajo fiican ka qaba in abuurkan uu wax ka beddelo nolosha qoysaskooda oo ayaxa iyo jilaalaha ay saameeyeen ilihi ay ku tiirsanaayeen.
Gaalkacyo: Haween ku shaqo beelay cudurka COVID19